Nylon Slider |
MC nylon inotsvedza ine hupenyu hwakareba hwakareba kupfuura hwesimbi, uye kupfeka kwayo kuramba kuri 3-7 zvakapetwa izvo zvesimbi yesimbi nesimbi isina chinhu. Kukwikwidzana kwaro kwakaringana idiki, inozvizora yega, isiri-yekubatanidza zvinhu, yakasimba simba simba, yakanaka musanganiswa mamishini zvivakwa, acid kudzvinyirira, alkali kuramba, munyu ngura kuramba, kuchembera kuramba, yakaderera tembiricha kuramba, hutsanana, husina-huturu, uye huremu hwakareruka . Yakanaka zvinhu zvekuchengetedza zvinhu zvakawanda uye zvekufambisa zvekushandisa ...
Nylon pushoni ine yakanakisa kugadzikana uye yakanakisa mehendi zvivakwa
Zvinhu zvenaironi pamutsa ane mukuru kuoma, mukuru tensile nemishonga, vakafugama nemishonga, simba simba uye yakakwirira chiwedzerwa. Simba rayo rekumanikidza rakaenzana neiro resimbi, uye simba rayo rekuneta riri padanho rakaenzana nesimbi yakakandwa nealuminium alloy. .
yemhando yepamusoro Nylon inotsvedza yeKuvaka michini mhando
Nylon inotsvedza inoshandiswa zvakanyanya mainjiniya mapurasitiki, anofukidza angangoita ese maindasitiri minda. Iyo nylon inotsvedza ine yakanaka kukanganisa kuramba uye kuneta kuramba, uye kugona kwayo kurwisa vibration zvakare kwakanyanya kunaka. Ruzha rwunogadzirwa nekaviri kana kanokwana pasi pasi peyesimbi inotsvedza.
Unyanzvi kugadzirwa kwemotokari jekiseni zvikamu zvine hunhu hwakasimba
Zvemotokari epurasitiki zvikamu, ndiko kuti, chigadzirwa zvishongedzo zvakagadzirwa zvepurasitiki pamotokari. Zvikamu zvepurasitiki zvinoshandiswa zvakanyanya mumotokari. Pakati pavo, nhengo dzemuviri uye zvemukati zvakajairika, uye zvemukati zvikamu zvakanyanya.
Nyanzvi mukugadzirwa kwe crane nylon inotsvedza ine ruzivo rwakawanda
Iyo nylon inotsvedza ine yakanaka kukanganisa kuramba uye kuneta kuramba, uye kwayo kuramba kune vibration zvakare kwakanyanya kunaka. Iyo crane nylon inotsvedza inotsiva iyo inotsvedza simbi, iyo isingangochengetedze chete mitengo yekugadzirisa, asi zvakare inoderedza kumanikidza kwekusvibiswa kwenzvimbo.